अर्जुन बिकको पहिला र अहिलेको वास्तविक कहानी ! फिल्मी दुनियाँमा यस्ता थिए भाइरल अर्जुन (भिडियो सहित)
भनिन्छ मान्छेको जीवन उकाली अनि ओरालीको संगम हो । जीवनमा उतार चडाव त हरेक मान्छेले देखेको हुन्छ । संघर्षलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तिको जीवनमा अचानक दु:खको आंधीबेरी आउँदा उसको जीवन मानौं तहस नहस नै भएको अनुभूति हुन्छ होला । अहिले सामाजिक संजालमा एकाएक भाइरल भएका अर्जुन बिकको जीवनमा दु:खको आंधीबेरी यसरि आइदियो कि लाग्छ आखिर मान्छेको जीवन के नै रहेछ र ? अर्जुन बिकको अहिलेको जीवन हेर्दा त्यस्तै अनुभूति हुन्छ।
गीत संगीतमा लागेर एउटा कुशल गायक अनि र्यापरका रुपमा चिरपरिचित अनुहार थिए, अर्जुन बिक । नेपाली रजतपटका दर्जनौ परिचित अनुहारसँग अभिनय कुशलता प्रस्तुत गरिसकेका अर्जुनलाई पर्दाका हिरो भन्दा फरक पर्दैन । गीत सुन्दै नाचू नाचू लाग्ने खालका विभिन्न डीजे गीत गाईसकेका र विभिन्न कलाकारहरुसँग पर्दा शेयर गरिसकेका अर्जुन अहिले त्यो रंगिन दुनियाँबाट पलायन भएका छन् ।
यसरि पलायन हुनुको पछाडी बाध्यता बन्यो, उनको परिवार । परिवारलाई जसो तसो संघर्ष गरेर भएपनि मिठो मसिनो जसरी सक्छु त्यसरी खुवाउछु भनेर दिन रात नभनी परिश्रम गर्न थाले । तर दैबको अगाडी कसैको केही लाग्दैन भनेझैँ उनकी श्रीमतीले ४ महिनाको दुधे बालकलाई चटक्क छोडेर उनीबाट टाढा भईन् । सँगै जीउने सँगै म’र्ने कसम खाएकी श्रीमतीले दुधे बालकलाई छोडेर चट्टक्कै माया मा’रेर गएपछि उनी नितान्त एक्लो भए ।
आफ्नो २ बर्षिय छोरालाई पिठियुंमा सर्टले बेरेर बोकी काम गर्न हिंडेको तस्बिर सामाजिक संजालमा एकाएक भाइरल भयो । उक्त तस्बिर भाइरल भएपछि हाम्रै च्यानल मार्फत पहिलो पटक हामीले उनलाई दर्शक माझ उनको कारुणिक कथा प्रस्तुत गरेका थियौ । भाईरल भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै उनी र उनका छोराका लागि देश तथा विदेशबाट शुभचिन्तकहरुले सहयोगको हात अगाडी बढाईरहनु भएको छ ।
अब उनका लागि एक मात्र सहारा छन्, उनका २ बर्सिय छोरा, बिकाश । श्रीमतीले छोडेर गएपछि अहिले अर्जुनले आफ्ना छोरालाई आमा र बाबा दुवै बनेर हुर्काई रहेका छन् । छोराको उज्ज्वल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् । उनका हामी लगायत सबै सुभचिन्तकको इच्छा उनी त्यहि दुनियाँमा फर्केको हेर्ने छ । उनको त्यो सपना पुरा गर्न तपाई हामी सबैले उनको होस्टेमा हैंसे मिलाउनु पर्ने आव्सेकता छ । दुख र पिडालाई नजिकबाट नियालीसकेका अर्जुनले फेरी पछाडी फर्केर हेर्न नपरोस् । थप भिडियोमा हेर्नुहोला :